Horumarinta Dhacdooyinka Baraha Bulshada: Hagaha Dhamaystiran | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Horumarinta Dhacdada Warbaahinta Bulshada: Hagaha Dhamaystiran
Horumarinta Dhacdada Warbaahinta Bulshada: Hagaha Dhamaystiran
Marka ay timaado xayeysiinta dhacdooyinka warbaahinta bulshada, waa muhiim in la sameeyo qorshe. Haddi aad macaamiisheeda u qabanayso xaflad gaar ah, ama aad u dhigayso kumanaan kun, in aad istiraatijiyad yeelato waa fure.
Aaladaha warbaahinta bulshadu waxay kuu ogolaanayaan inaad dhagaystayaashaada kala qaybsato habab hal abuur leh oo kor u qaadaya imaanshaha kana dhigaya khibrad wanaagsan.
Badanaa, qabanqaabiyayaashu waxay ku bixin karaan lacag badan iyo tamar suuq-geyn ka hor dhacdo dhacdo iyada oo aan wax badan laga fikirin waxa soo socda. Laakin, xayaysiinta dhacdada warbaahinta bulshadu way ka fogtahay marki martidaadu ay soo mareen albaabka.
Istaraatiijiyad dhacdada warbaahinta bulshada wax ku ool ah ayaa ku lug yeelan doonta ku xidhida taageerayaashaada ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib dhacdo. Waa kuwan qaar ka mid ah farsamooyinka warbaahinta bulshada ee loogu abuurayo khibrad dhijitaal ah oo dilaa ah martidaada, bilow ilaa dhamaad.
Bonus: Hel qaab-dhismeedka istaraatiijiyada warbaahinta bulshada ee bilaashka ah inaad si dhakhso ah oo fudud u qorsheysato istiraatijiyad adiga kuu gaar ah. Sidoo kale u isticmaal si aad ula socoto natiijooyinka oo aad u soo bandhigto qorshaha madaxaaga, asxaabtaada, iyo macaamiishaada.
6 siyaabood oo kor loogu qaado dhacdo baraha bulshada kahor intaysan dhicin
1. Ku dheji tirinta sheekooyinka Instagram
Istiikarada tirinta ee Sheekooyinka Instagram-ka ayaa kuu ogolaanaya inaad dejiso taariikhda dhamaadka iyo waqtiga. Waxaad sidoo kale habeyn kartaa magaca iyo midabka saacadda.
Daawadeyaashu way is-diiwaangelin karaan si ay u helaan ogaysiis marka ay saacaddu dhammaato, ama ku daraan tirinta Sheekadooda.
Habkani asal ahaan waa ogeysiis jadwal sumadeysan. Waa qalab aad u fiican oo lagu wado iibinta tigidhada ama lagu xasuusinayo dadka wakhtiga kama dambaysta ah ee tartamada ama qiimaha shimbiraha hore.
2. Samee bogga dhacdooyinka Facebook
Samee dhacdo Facebook oo ay ku jiraan dhammaan faahfaahinta martidaadu u baahan doonaan. Tag boggaga rasmiga ah ee ku hadlaada lagu casuumay ama martida gaarka ah.
Goobta dooda ee dhacdada waa meel fiican oo lagu dhejiyo ogeysiisyada ama looga jawaabo su'aalaha. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho ereyga ku saabsan koodka iibka ka hor ee gaarka ah ama la wadaag wakhtiyada go'an ee riwaayad halkaas ku taal.
Haddii ay jiraan tigidhada laga heli karo Eventbrite, waxaad haysataa ikhtiyaarka aad ku xidhayso akoonkaaga Facebook. Marka isdhexgalka la sameeyo, ka qaybgalayaashaadu waxay iibsan karaan tigidhada iyaga oo aan waligood ka tagin dhacdada Facebook.
3. Ku dhaji teasers oo leh faahfaahin lagama maarmaan ah
La wadaag tafaasiisha la xidhiidha wakhtiga ka horreeya dhacdada. Teasers ayaa gacan ka geysta dhisidda xayeysiinta waxayna sidoo kale siin karaan xubnaha dhagaystayaashaada macluumaad faa'iido leh.
Sidoo kale waa hab aad ku tusi karto martidaada sharafta. Haddii aad martigelinayso shir weyn, waxaad mid mid u soo bandhigi kartaa kuwa ku hadlaya martidaada toddobaadyada ka hor inta aan la qaban.
Ama, la wadaag waraysiyada xiddigaha dhacdadaada, sida RuPaul's Drag Race oo la wadaago xilli-ciyaareedkooda ka horreeya "La kulan Queens".
La kulan Boqorada #DragRace Xiliga 10, henny!! 🔟👑 https://t.co/wIfOPo7tpo pic.twitter.com/8DF85yUy0V
- Tartanka Jiiditaanka RuPaul (@RuPaulsDragRace) Maarso 5, 2018
4. Samee hashtag
Hashtag calaamadeysan ayaa adiga iyo martidaadaba u ah hab ku anfacaya inaad ka heshaan dhammaan macluumaadka la xiriira dhacdadaada guud ahaan kanaalada bulshada.
Samee hashtag aan hore loo isticmaalin si aanay dhacdadaadu ugu aasin buur aan khusayn
Hashtag-yada ugu faa'iidada badan maahan kuwo gaar ah, waa kuwo gaaban oo si fudud loo higgaadinayo. Ma qof baa ogaan lahaa sida loo qoro haddii aad kor ugu sheegto iyaga?
Midka gaaban, ayaa ka fiican, sidoo kale. Xusuusnow, waxaad u baahan doontaa inaad ku habboonaato URL-gaaban ee bogga dhacdada ee ku dhex jira xadkaaga dabeecadda sidoo kale.
U isticmaal hashtaggaaga dhammaan macluumaadkaaga warbaahinta bulshada, oo ku dar dammaanad suuqgeyneed oo kale, xitaa agab daabacan.
5. Si qarsoodi ah u bixi
Hal dammaanad oo ku saabsan dhiirrigelinta dhacdada warbaahinta bulshada? Dadku waxay jecel yihiin fiirsasho wanaagsan oo daaha gadaashiisa ah. Iyada oo wakhti badan ka hor, muujin tidbits waxa martidaadu ay sugi karaan dhacdada.
La wadaag sawirada gadaashiisa iyo muuqaalada goobtaada, kuwa ku hadla, barnaamijyada, iyo swag.
Jameela Jamil waxay inta badan xirtaa bandhigeeda, Meesha wanaagsan, Adiga oo wadaagaya sawirada goofy ee kabka ah, u ogolaanaya taageerayaasha in ay soo galaan shenanigans gadaasha ka hor inta aan la sii dayn qayb cusub.
Qoraal ay wadaagtay Jameela Jamil (@jameelajamilofficial)
6. Marti geliso wax-is-bixin
Tartannada wax-ku-bixinta warbaahinta bulshada ayaa kor u qaada wacyigelintaada sumadda waxayna caawiyaan u beddelashada taageerayaasha ka qaybgalayaasha dhacdada.
Waydii dadka inay la wadaagaan boostada tartanka akoonkaaga oo isticmaal hashtag si aad u soo gasho.
Marka ay wadaagaan, waxaad ku yeelan doontaa dhammaan indhaha taageerayaashooda sidoo kale astaantaada. Tani waxay ku siinaysaa gaari aad u ballaaran, oo qiimihiisu yahay sacab muggiis oo tigidho ama badeecado bilaash ah.
Haddii dhacdadaadu leedahay kafaala-qaadayaal, ka fiirso inaad weyddiiso alaab wax-is-daba-marin ah oo aad ku beddesho xayeysiin dheeraad ah.
5 siyaabood oo lagu dabooli karo dhacdo baraha bulshada marka ay dhacayso
7. U naqshadee shaandhada AR caadada u ah Instagram ama Snapchat
Helitaanka hal-abuurnimada saamaynta kamarada dhabta ah ee la kordhiyay (AR) waa hab madadaalo leh oo ay martida ula falgalaan dhacdadaada. Waxay ku isticmaali karaan iyaga u gaar ah Facebook, Instagram, ama Sheekooyinka Snapchat, taasoo horseedaysa waxyaabo isticmaale-sare ah oo heersare ah.
Loogu talagalay Instagram iyo Facebook: u qaabee filtarradaada summadaysan ee AR adiga oo isticmaalaya aaladda bilaashka ah ee Spark AR Studio.
Snapchat: waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho madal hal-abuurayaashooda bilaashka ah, Lens Studio 2.0. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo dhiso mid.
Soo rar sawiradaada iyo dhawaqyadaada abka midkood oo waxaad u socotaa inaad dhisto qaabkaaga AR.
Yaa og, laga yaabaa in saamaynta kamaradaada caadada u ah ay noqon karto mid caan ah sida shaandhada eyda. Ama filtarka madaxa dheeman ee Rhianna.
Qoraal uu wadaagay Kristen bell (@kristinanniebell)
8. Ka qaybgalayaasha waraysiga Sheekooyinka Instagram
Ma ku daawataa waxyaabaha muhiimka ah ee roog cas Instagram-ka, xitaa haddii aadan la socon dhammaan bandhigga abaalmarinta? Sabab baa jirta.
Wareysiyo gaagaaban oo lala yeesho maadooyin xiisa leh ayaa ka dhigaya waxyaabo soo jiidasho leh oo si fudud loo dheefshiido. Samee daqiiqado rooga cas adiga kuu gaar ah inta ay dhacdodu socoto.
Isticmaal Sheekooyinka Instagram si aad ula wadaagto falcelinta dadka iyo dareenka ku saabsan dhacdadaada goobta. Maxay dadku ka hadlayaan? Waa sidee dareenka guud?
Dhibcaha gunnada haddii aad heli karto wakhti-wakhti-wakhti marti qaas ah ama soo-jeediyeyaal.
9. Tweet toos ah
Ka caawi in dadka FOMO-ga la ilaaliyo-ama kordhiso-adiga oo wadaaga sawirada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee maalinta ay dhacaan.
Ka fakar tweet-gaynta tooska ah inay tahay wargelin iyo madadaalo-ciyaar-ciyaareed ee dhacdada.
Tweet-ka tooska ah ayaa dejinaya qaabka iyo qaabka wada hadalka khadka tooska ah ee dhacdadaada. Waxay faa'iido u leedahay qabashada bandhigyada, ama khudbadaha waqtiga, sida shirarka, doodaha, iyo dhacdooyinka hadalka.
La soco isticmaalka hashtag-ga dhacdadaada oo wadaag daqiiqadaha qosolka leh, waxyaabaha muhiimka ah ee la qaadanayo, iyo xigashooyinka xoogga leh ee kuwa ku hadla.
Daboolista dhacdada tooska ah waxay sidoo kale muhiim u tahay ka-qaybgalka martidaada wakhtiga dhabta ah. La soco quudintaada si aad wax uga qabato wixii welwel ama su'aalo ah oo u soo kordha dadka.
Dadkii ugu qaylada badnaa ee aan la kulmay @budweiserstage. #BillieEilish, taageerayaashaadu waa wax kale… 🕷 pic.twitter.com/f6PmJb5D4w
- Taageereyaasha Qaranka Live (@LiveNationFans) Juun 12, 2019
10. U sheeg kuwa raacsan inay kuu yimaadaan haddii aad qabtid
Haddii aad hayso wax gacan ah oo aad ku bixiso, u sheeg dadka halka ay kaa heli karaan goobta.
Waa maxay sababta gacanta loo dhiibo? Daraasada Inkwell ee 2017 waxay ogaatay in lix ka mid ah 10 qof ay hayn doonaan alaabada xayeysiinta ilaa laba sano.
Alaabooyinka xayeysiinta ayaa aad waxtar u leh marka ay isugu jiraan faa'iido iyo madadaalo, sida xirmooyinkan Caarada-Man.
Kelmada ka bixi kanaaladaada oo ku saabsan halka aad u aadi karto xoogaa bilaash ah oo macaan. Alaabooyinka summadaha leh ayaa sida ugu wanaagsan loo dhiibaa mid-ka-mid ah, taasoo kuu ogolaaneysa inaad xiriir gaar ah la sameyso dhagaystayaashaada.
OMG!! I ❤️❤️❤️ xirmooyinka caafimaadka ee @united Spider-Man cusub!!!! pic.twitter.com/mYAgZqZJhE
- Gary Cirlin (@garycirlin) Juun 13, 2019
11. Ku soo bandhig qoraallada baraha bulshada ee munaasabadda
Baraha bulshada ayaa wali noqon kara waayo-aragnimo wadareed iyada oo aan qof kastaa hoos u eegin taleefankiisa.
Isticmaal qalabka isku-darka warbaahinta bulshada sida Hootfeed. Hootfeed waxay isticmaashaa hashtaggaaga gaarka ah si ay ugu riixdo tweet-yada la xidhiidha bandhigga wakhtiga dhabta ah.
Istaraatiijiyadani waxay ka dhigaysaa wada-hadalka khadka intarneetka mid la heli karo oo la falgeli karo dadka qolka ku jira. Waxa laga yaabaa inay xitaa ku qanciso inay ku soo biiraan, sidoo kale.
Waxaan u isticmaaleynay 3 shaashad @hootsuite #HootFeed shirkeena MASSIVE #BNBoom. Si buuxda ayaa looga qayliyay adeegsiga farsamadan #HootAmb pic.twitter.com/RQ7TSro5Wl
- James Lane (@JamesLaneMe) Sebtembar 13, 2017
6 siyaabood oo kor loogu qaado dhacdo baraha bulshada kadib markay dhamaato
Xusuusnow: dhiirrigelinta dhacdada warbaahinta bulshadu ma dhammaanayso marka dhacdadaadu dhammaato. Weli waxaa jirta shaqo badan oo in la qabto.
12. Ku dhaji nuxurka isticmaaluhu soo saaray ee dhacdada
Haddii hashtaggaaga gaaban, si sahlan loo xasuusan karo uu qabtay shaqadiisa, way sahlanaan doontaa in la helo macluumaadka ay dhejiyeen dhagaystayaashaada iyo soo-jeediyeyaashaada xaqiiqda ka dib.
Ka jawaab oo wadaag macluumaadka isticmaaluhu soo saaray si aad xidhiidh gaar ah ula samayso ka qaybgalayaashaada. Waxaad sidoo kale heli doontaa inaad u dabaaldegto guushaada oo aad ka soo bandhigto dhacdadaada dhinacyo badan.
Markii dhaqdhaqaaqa I Miisaanka la bilaabay sanadka 2019, xisbigu waxa uu soo bandhigay sawir is dhexgal ah oo qabtay shaqo fiican oo dhiiri galinaysa nuxurka isticmaale ee firfircoon. Waxay wadaageen sawiro waxayna u mahadceliyeen martidii ka soo qaybgashay dabagal ahaan.
Qoraal uu wadaagay I WEIGH 📣 (@i_weigh)
13. Lasoco macaamiisha
Marka bandhiggu dhamaado oo dadku ay ku soo noqdaan hawl maalmeedka, dib ula xiriir iyaga si aad ugu tiraahdo mahadsanid ama u rajaynso safar ammaan ah oo gurigooda.
Ha ka tagin darafyo dabacsan oo furan. Haddii dadku ay weli qabaan welwel ama cabashooyin, la soco iyaga si aad u hubiso in arrimahaas wax laga qabtay.
Tani waxay wax badan ka taraysaa xoojinta xidhiidhka dadka ee sumaddaada. Waxay aad ugu dhowdahay inay mar kale kula macaamilaan, hadday taasi online tahay ama dhacdada xigta.
14. Ku badbaadi dhacdooyinka muhiimka ah meelaha ugu muhiimsan
Mid ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan Sheekooyinka ayaa ah in aysan boos ka qaadan profile kaaga, si aad u dhejiso mug sare oo ka kooban oo aan u baahnayn in ay noqoto mid la sifeeyey.
Laakin ma doonaysid in dhammaan waxyaabahaas ku jira ay ku baaba'aan 24 saacadood gudahood, gaar ahaan haddii aad halkaas ku samaynaysay qaar ka mid ah caymiska dhacdada.
Iyadoo Sheekooyinka Instagram-ka iyo Facebook ay ku baxeen maalin gudaheed, waxaad ku dhejin kartaa isla nuxurka Sheekooyinkaaga Muhiimka ah si aad ula wadaagto waqti dheer.
Qodobbada ugu muhiimsan waxay ku nool yihiin astaantaada ilaa aad tirtirto. Waxay kuu oggolaanayaan inaad hagaajiso nuxurka sheekadaada oo aad ku habayso calaamado kala duwan. Iftiimin kasta oo la calaamadeeyay waxa uu u muujinayaa sida summada gaarka ah ee boggaaga oo leh magac gaar ah iyo sawirka daboolka.
15. U samee soo koobid dadka aan samayn karin
Xitaa haddii qaar ka mid ah taageerayaashaadu aysan halkaas joogi karin qof ahaan, weli way ka qayb qaadan karaan khibradda dhacdada.
La wadaag macluumaadka dadka siinaya dhadhanka waxay tabayeen. Soo dheji sawirro iyo muuqaallo dhiirigelin doona in "waa-sida-aniga-halkaas-joogay" dareenka.
Haddii aad haysato liiska sugitaanka ee dadka aan awoodin inay goostaan ​​tigidhada, u dir waxyaabo gaar ah si ay u ogaadaan inaad qiimeyso danahooda.
"Uma malaynayo in dawladeenu tahay mid aan la soo furan karin. Haddaan sameeyo, maan isa soo sharixi lahayn.” - @AOC at #SXSW 2019
- SXSW (@sxsw) Juun 7, 2019
16. Falanqee waxqabadkaaga
Ma jiro olole suuqgeyneed oo dhammaystiran la'aanteed qayb qiimayneed.
U deji yoolalka iyo cabbirrada warbaahinta bulshada wakhti ka hor si aad u cabbirto guusha ololahaaga iyaga. Ma ahayd iibinta tigidhka mudnaantaada? Wacyigelinta astaanta?
Si qoto dheer ugu dhufo falanqayntaada. Soo hel in kooxdaadu ay gaadhay hadafyadaas waxqabadka iyo sida wanaagsan ee aad u fulisay qorshahaaga.
Fikradaha aad ka heshay ololahan ayaa ku wargelin doona sida aad u horumariso istaraatiijiyada warbaahinta bulshada ee dhacdooyinka mustaqbalka.
17. Samee sahanka dhacdada ka dib
Haddii aad rabto in aad ciyaartaada kor u qaaddo, waxa muhiim ah in aad waydiiso dadka waxa ay u arkaan dhacdada.
Ku samee sahamin dhacdada kadib goob bilaash ah sida SurveyMonkey. Waxa kale oo aad su'aalo ku weydiin kartaa adiga oo isticmaalaya istiikarada codbixinta iyo dhejiyaha emoji ee Sheekooyinka Instagram.
Weydiinta ra'yi-celinta sifooyinka codbixinta warbaahinta bulshada waa mid aan rasmi ahayn. Waxay u sahlaysaa dadka inay ka jawaabaan. Maskaxda ku hay in ra'yi-celintani aysan noqon doonin qarsoodi.
Qaabka sahanka khadka tooska ah ee qarsoodiga ah ayaa u ogolaanaya dadka inay qaataan waqti si ay u horumariyaan fikradahooda. Waxaad aakhirka heli doontaa jawaab celin daacad ah oo waxtar leh.
Ha u dirin sahankaaga ka qaybgalayaasha oo keliya, sidoo kale. Soo-bandhigayaasha, qabanqaabiyeyaasha, iyo tabaruceyaasha dhamaantood waxay leeyihiin fikrado qiimo leh oo ay wadaagaan.
Isku day inaad u furnaato dhammaan noocyada jawaab celinta. Waxa kaliya oo ay ka dhigi doontaa habkaaga xayeysiinta dhacdooyinka warbaahinta bulshada ee mustaqbalka xitaa ka sii wanaagsan.
Kor u qaad dhacdooyinka summadaada dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada ee waaweyn hal dashboard leh Hootsuite. Orod tartamada, dhaji teaserka, oo la soco ka qaybgalayaasha. Isku day bilaash maanta.
14-ka Hab ee ugu Wanaagsan ee Baraha Bulshada ee ay tahay in aad Raacdo 2020
Hagaha ugu sarreeya ee WordPress DNS